The Sneaky CPA itinyekwu 2.0 : Olee otú Iji Mepụta gị First itinyekwu - Foneelu Of The Day
The Sneaky CPA itinyekwu 2.0 : Olee otú Iji Mepụta gị First itinyekwu
Olee otú Iji Mepụta CPA itinyekwu na site na Sales Ozugbo
Hi Francis ebe a na-ekele gị ọzọ nke ukwuu maka nzaghachi gị. Na dị ka nkwa ebe a bụ gị nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu iwu gị nnọọ mbụ Sneaky CPA itinyekwu.
Always ebe a iji na-anụ na-enye gị uru. Otú echegbula i nwere ike ịkpọtụrụ m n'oge ọ bụla na [email protected]
Reminding : Ị mkpa na-esonụ ngwaọrụ iji ike gị foneelu
A na saịtị (ngalaba aha) na / ma ọ bụ clickfunnel
3 ka 4 CPA rịọ
The Top 7 Nzọụkwụ Iji Mee Gị First itinyekwu
Ebe a na-esonụ na-ewu ya onwe gị
Nweta ngalaba na namecheap
Jikọọ ngalaba gị Bochum na akaụntụ
Jikọọ ngalaba gị Clickmagic
Jikọọ Rotator na gị foneelu
Tinye na-enye n'ime Clickmagic
Malite gị okporo ụzọ mkpọsa
m zụtara 2 ngalaba (otu maka isi na saịtị na ọzọ maka clickmagic ka rotator domain). Ha na-eri nnọọ $5.76 n'ihi na i na-aga maka .me
Jikọọ ngalaba Iji Gị Hosting Account
M na-eji hostnine ka a nọrọ n'ụlọ m domain. Ọ bụ ya mere m ga-agbanwe domain aha sava ebe a.
Kpọtụrụ gị Bochum ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eme ya ma ọ bụ nanị na-ajụ gị dns. Ha ga-enyere na-ezo na gị na ngalaba na gị onwe gị na sava.
Ahụ na-aga gị Cpanel ịgbakwunye gị domain n'ebe ahụ.
Ị ga-enweta ihe dị ka nke a ma ọ bụrụ na i mere ya n'ụzọ ziri ezi
Ekele. Ugbu a ị chọrọ iji wụnye WordPress na na ohuru domain. Echegbula, very easy or you can go to Youtube and search for « how to install wordpress »
Ozugbo dechara ebe a bụ n'ihi.
Mee The itinyekwu
Mgbe na ị nwere iji wụnye Instabuilder ma ọ bụrụ na ị ga-aga na clickfunnels. Soro nzọụkwụ n'okpuru iji wụnye a plugin (Ọ bụghị free)
Mgbe ahụ ị ga-eme n'ọrụ ya na itinye gị ikike dị ka m mere.
Ọ dị mma. Ugbu a ị na-eji Instabuilder ma ọ bụ CLickfunnel ike kpọmkwem 4 pages like the ones below :
M na-adịghị aga na-egosi gị otú ị na-ewu ha n'ihi na i nwere ike iji aka ha nkuzi na-eme otú. Na adịghị idetuo kpọmkwem okwu site okwu ihe m mere.
Jikọọ Domain Iji Your Clickmagic Account
Họrọ nke abụọ domain anyị zụtara. Nke ahụ bụ otu anyị ga-eji na Clickmagic.
Tinye www.clkmr.com. Wher you have the red bar. Dochie gara aga data e na ihe m dị nnọọ nyere gị. And you go to your Clickmagic account :
Pịa Tools / Domain Manager na tinye gị abụọ domain e dị ka m mere. Lee foto dị n'elu.
Then you have to create your rotator : pịa Rotators / Mepụta New Rotator mgbe jupụta ụdị ụdị dị ka m mere.
Ị nwere ike iji ha Help ngalaba ma ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eme ya kpọmkwem. 🙂
Mere nke ọma enyi.
Jikọọ Rotator And Your itinyekwu
N'ezie mpako nke gị n'ihi na ị mere ya. Ọ dịghị site n'ịgụ akụkụ a ma site n'ime ihe ruo mgbe ebe a. I kwesịrị inweta ihe ịga nke ọma na ị na-na na na-adịghị anya.
Ugbu a idetuo gị rotator njikọ ị dị nnọọ kere ma na-aga mado ya na gị na foneelu
Tapawa gị njikọ n'okpuru edinam button maka ibe
Tinye offfers n'ime Clickmagic
All ị ga-eme ugbu a bụ itinye gị CPA awade gị Clickmagic rotator na ị na-adịghị na-emetụ ihe na gị foneelu.
Ọ bụrụ na ihe na-enye akpa, nnọọ na ị na-eji dochie ya ozugbo na clickmagic bụghị na foneelu.
Ebe a na-CPA awade m họọrọ si Maxbounty netwọk.
Na n'ikpeazụ na ị na nzọụkwụ ọzọ bụ ụgbọala oke okporo ụzọ gị na foneelu, zuru ike na-ahụ ego mpịakọta na akaụntụ gị.
Ya mere ... ọzọ , ma ọ bụrụ na ị na-obi efu, dị nnọọ kpọtụrụ m. M ebe a na-enyere.
Echefukwala download ị dfy foneelu.
Mepụta akaụntụ gị ebe a ma ọ bụrụ na ị na-adịghị onye
Download ya ebe a.
Ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Ledo onwe gị
The itinyekwu nke ụbọchị Team